Samsung Galaxy S6 Edge Nyochaa | Gam akporosis
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | Nyocha, Samsung
Samsung ejiri Samsung Galaxy S6 Edge sie ike, a groundbreaking ngwaọrụ na a doro nnọọ anya ozi: mezue nkewa ekwentị nke onye Asia.
Mmetụta mbụ m nwere Mgbe a nwalere ha n'ime usoro MWC, ha enweghị ike ịka mma. Ugbu a mgbe gosi gi nyocha zuru ezu, oge erugo inye m nke m echiche nke Samsung Galaxy S6 Edge mgbe otu ọnwa ojiji dị ka isi ọnụ.
1 Igwe ahụ na-adabara Samsung Galaxy S6 Edge nke ọma
2 Samsung Galaxy S6 Edge, ngwaọrụ dị mma ma dị mma
3 Ihuenyo kachasị mma na ahịa
4 Batrị nke na-arụ ọrụ ahụ
5 Ọmarịcha akụkụ abụọ na-adọrọ adọrọ na-enweghị isi
6 Touchwiz, nnukwu enyi ahụ
7 A akara mkpisiaka ihe mmetụta kwesịrị ekwesị nke kacha mma gam akporo ekwentị
8 Igwefoto nke Samsung Galaxy S6 Edge ga-atọ ndị hụrụ foto ụtọ
9 Mkpebi na echiche mgbe ị jiri Samsung Galaxy S6 Edge maka otu ọnwa
Igwe ahụ na-adabara Samsung Galaxy S6 Edge nke ọma
Otu n'ime akụkụ ndị ama ama nke ọhụụ Samsung ọhụrụ bụ imewe ya ma mechaa. Ma mgbe otu ọnwa ejiri ya na Galaxy S6 Edge enwere m ike ịgwa gị na ọ bụghị naanị ọnụ ahịa mara mma, kamakwa Ọ na-eguzogide ọgwụ ma na-emecha mma.
Anyị amaworị na Samsung ga-eme mgbanwe dị egwu na onye ọhụụ nke ezinụlọ Galaxy S, onye nrụpụta ga-aga ịkụ nzọ maka akụrụngwa dị mma maka iwu ekwentị ọhụrụ ya, na-ahapụ polycarbonate ebe niile. NA mkpebi ahụ agaraghị enwe ihe ịga nke ọma ọzọ.
na iko emecha nyere ya ikuku nke iche na Galaxy S6 Edge nke nwere ekele. Na eziokwu na ọ nwere okpukpu abụọ gbagọrọ agbagọ, na-enye ekwentị ahụ anya pụrụ iche, akara ọtụtụ.
Samsung Galaxy S6 Edge bụ ezigbo ọnụ na-emetụ aka. Ọbụghị naanị na ọ nwere ogo zuru oke, mana ọ nwere njigide dị mma. Na mbido, akụkụ n'akụkụ ya mere ka ọ bụrụ ihe ijuanya ịnwe Samsung Galaxy S6 Edge n'aka gị, mana ọ naghị ewe oge iji mee ụdị ya.
Mgbe ụbọchị ole na ole jiri m hụrụ otu ihe na-adọrọ mmasị: mkpisiaka nchedo na-arụ ọrụ ebube. Na ileba anya mbu ị nwere ike iche na iko nke Galaxy S6 Edge ga-abụ akwụ nke mkpịsị aka, mana ọ nweghị ihe nwere ike ịga n'ihu n'eziokwu ahụ. Ya oleophobic oyi akwa awade nnukwu results.
Samsung Galaxy S6 Edge, ngwaọrụ dị mma ma dị mma
Na aka Samsung Galaxy S6 Edge bụ ekwentị dị oke mma. Ọ bụ eziokwu na ọ nweghị otu njide dị ka ekwentị rọba, Enweghị m mmetụta na m ga-ada na, n’ime ọnwa a, enwebeghị m nsogbu ọ bụla na nke a. Dị nnọọ iche, Samsung Galaxy S6 Edge dị ezigbo mma ijide.
Naanị ihe anaghị eme ka m chịa ọchị bụ igwefoto azụ, nke na-apụ n'azụ ekwentị. Samsung na-atụ aro itinye ekwentị ihu ala iji nweta atụmatụ nke ogwe aka ya abụọ ihe anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa, mana m, ma amaara m na ọtụtụ n'ime gị, etinyela ekwentị ahụ na ihuenyo na-eche ihu ugbu a agaghị m agbanwe akụkụ a.
Como igwefoto na-apụta dịtụ ekwentị na-ada ụda ntakịrị. Ọ bụ uru na mgbe ekwentị maa jijiji, ị hụrụ ya, mana anaghị m amasị eziokwu ahụ bụ na igwefoto na-akpakọrịta na ihu igwe na-adabere na ya.
Banyere oyi akwa Gorilla Glass 4, ekwesịrị ikwu na ọ karịrị ọrụ ya. Ekwentị na-ata ahụhụ oge ụfọdụ na-enweghị nhụjuanya ọkọ. N'ime ọnwa ojiji a, ebuola m Samsung Galaxy S6 Edge na-enweghị nchebe ọ bụla, n'akpa m na igodo, mkpụrụ ego na ihe ọ bụla ọzọ nwere ike imebi ngwaọrụ ahụ ma ọ kpụbeghị akpụ, ihe m nwere ekele.
Anyị ahụworị ụfọdụ ule na-eguzogide nke Samsung Galaxy S6 Edge na-egosi ekweghị ekwe nke gị na ihuenyo. Ugbu a enwere m ike ikwe nkwa na anaghị ejikwa vidiyo ndị a eme ihe.
Ihuenyo kachasị mma na ahịa
Enwere m ike ịgwa gị ntakịrị gbasara njirimara teknụzụ nke Samsung Galaxy S6 Edge na ị nwere ike ịmabeghị: Super AMOLED QHD ihuenyo, Exynos 7420 processor, 3 GB nke DDR4 RAM, igwefoto megapixel 16 ... Na nkenke, ihe a tụrụ anya na ekwentị dị elu dị ka anyị kpughere gị na nyocha mbụ anyị nke Samsung Galaxy S6 Edge. Ma mgbe ịgha aka ịkwanye, Kedu ka arụmọrụ nke Samsung Galaxy S6 Edge?
Azịza ya dị nnọọ mfe: n'enweghị obi abụọ Samsung Galaxy S6 Edge bụ ekwentị kacha mma m nwetụrụla. Aga m amalite site n'ikwu banyere ihuenyo gị. Samsung na-agbasi mbọ ike na eziokwu dị adị, ihe akaebe doro anya bụ Samsung Gear VR okpu agha, ọ na-egosikwa na ọ bụ otu n'ime ngalaba nlekọta kacha mma nke Galaxy S6 Edge.
Ihuenyo 2K ya dị mma maka ojiji na isi okwu gị, ma mgbe m nwalere isi ihe Gear VR na Galaxy S6 Edge na MWC 2015, ogo ahụ doro anya. ọ dị elu karịa nke nke Galaxy Note 4 na-enye.
Ma ọ bụ ya ihuenyo nke Galaxy S6 Edge dị nnọọ ebube n'ihe niile: ọ na-enye agba agba na oke nchapụta na ikwe ka ịhazie ụfọdụ akụkụ nke ihuenyo ahụ.
Naanị otu ma na-abịa na ọhụhụ n'èzí na ìhè anyanwụ, ebe ihuenyo S6 Edge tufuru ogo, karịa ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere IPS panel. Ọ bụ eziokwu na ị ka nwere ike ịgụ ọdịnaya, ogo na-adaba nke ukwuu.
Ezi uche ma ọ bụrụ na anyị na-atụle na Samsung Galaxy S6 Edge integrates a Ogwe QHD. Ihuenyo dị otú ahụ ọ bara uru na Smartphone? Ọ bụrụ na anyị tụlee na Samsung na-ebupụta ekweisi eziokwu dị adị nke na-eji ihuenyo nke ekwentị ha, azịza ya bụ ee ee.
Ọ dị oke njọ na ezigbo ihuenyo ahụ, onye kwuru okwu adighi elu. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọkà okwu na-arụ ọrụ ya, ụda abụghị nke kacha mma kachasị mma na ọnọdụ ya na-eme ka ọ dị mfe ịpị ya n'amaghị ama mgbe ị na-elele ọdịnaya ọ bụla ma ọ bụ na-egwu egwuregwu. Mmehie na-enweghị mgbaghara na ekwentị nwere ọmarịcha mmecha na imewe.
Onye ozo di uku ma bia na ncheta ya. Ihe ezigara m bụ 6GB Galaxy S32 Edge na enwere m ihe na-erughị 5GB n'efu. Tụle na m ebudatara ole na ole Spotify anatara na egwuregwu anọ, eziokwu bụ na ọ na-akụda.
Ọ bụ eziokwu na ebudatara songs bụ ndị na-ewe ihe kacha ohere, ma ọ bụrụ na ọ nwere a Micro SD kaadị oghere, dị ka P8 Lite na i nwere ike iji otu tree dị ka a SIM ma ọ bụ Micro SD kaadị, ọ ga-enweghị nsogbu a. A ụra na nkwojiaka na nke a.
Batrị nke na-arụ ọrụ ahụ
Enweela arụmụka dị ukwuu Samsung Galaxy S6 na S6 Edge nsogbu batrị, ọbụna na Galaxy S6 Edge nyochaa nke onye mụ na ya na-eme Manuel kwuru banyere obere ikike ọchịchị nke ọnụ. Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi na enwere m ọchichọ mana batrị nke Galaxy S6 Edge nke m na-anwale emeela ka m dị ka ọtụtụ ekwentị.
N'ụzọ dị otú a ekwentị jidere m ihe dị ka nkezi nke 16 ma ọ bụ 17 awa na n'etiti 4 na 5 awa nke ihuenyo na. Ọ bụ ihe ọ bụla na-enweghị isi mana achọpụtabeghị m arụmọrụ ọ bụla dị ala.
Ihe m chọpụtara bụ na usoro ngwa ngwa nke S6 ihu bụ ihe obi ụtọ.Inwe ekwentị gị na ihe karịrị 1 hour bụ ihe na-enweghị ọnụ na ọdịiche pụtara ìhè. Naanị ị ga-ekiri vidio ahụ anyị kwadebere na-egosi ọdịiche dị n'etiti ịchaji Samsung Galaxy s6 Edge na chaja a na-eji eme ihe iji iji usoro ntinye ngwa ngwa iji hụ na oge nkwụ ụgwọ belata ọkara. N'ime minit 15 ị nwere batrị ihe dị ka awa 4!
Ọmarịcha akụkụ abụọ na-adọrọ adọrọ na-enweghị isi
Enwere m ekele na e nwere akụkụ ụzọ abụọ gbagọrọ agbagọ, tụmadị na m bụ aka ekpe ma si otu a enwere m ike irite uru n'ọrụ niile ekwentị a na-enye site n'aka ekpe, mana n'oge eziokwu m ga-ekweta M nnọọ na-eji ya curved panel.
Iji nweta akụkụ buru ibu nke ohere ya, ị ga-enwerịrị ekwentị ihu ala. Agaghị m aghọgbu gị, dị ka ọ dị mma iji hụ ka otu akụkụ okpokoro ọkụ na-enwu mgbe ị natara oku, agaghị m agbanwe àgwà m maka nkọwa ahụ.
Ọrụ ọzọ ọ nwere bụ ike ịlele ọkwa site na ịdọrọ mkpịsị aka gị n'akụkụ. Site na mmegharị a, ị ga - ahụ oge ma ọ bụrụ n’ịnata ozi na obere ihe. Ọzọ kama adịghị mma mma ebe ọ bụ na ị na-enweghị ike ịgụ na ngosi si n'akụkụ nke ekwentị.
O nwekwara a ọnọdụ ọkpụkpọ ọsọ ọsọ Ọ na - enye gị ohere ịhazigharị ihe ruru kọntaktị 5 iji kpọọ ha ma ọ bụ zigara ha ozi ọsịsọ m na - ekwu maka SMS, ọ naghị enye gị ohere izipu ozi site na WhatsApp ma ọ bụ ọrụ ozi ozigbo ọ bụla. Ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, ọrụ ọzọ na-abaghị uru.
Nanị nhọrọ a na-eji eme ihe bụ elekere. Oge azụ azụ na-egosi dị ka ezigbo echiche. I nwekwara ike hazie na ihe nso nke awa ị chọrọ ka backlit oge a ga-hụrụ.
Nkwubi okwu m di mfe: ị ga - eji ogwe osisi gbagọrọ agbagọ? Mba. Ọ bara uru ịkwụ ụgwọ 100 euro iji nwee Galaxy S6 Edge? N'uche nke m, ee maka inwe ekwentị dị iche iche nwere nka pụrụ iche, mana ọbụghị n'ihi ọrụ ya.
Touchwiz, nnukwu enyi ahụ
Dịka ị nwere ike ịkọ, Samsung Galaxy S6 Edge nwere ike ịmegharị egwuregwu ọ bụla na-enweghị nsogbu, mana kedu ka isi ọhụụ nke onye nrụpụta Korea na-eme n'ozuzu ya? Touchwiz ọ ka dọkpụrụ? Luckily Samsung jisiri ike dozie a manụ nsogbu.
Ma ọ bụ na n'ikpeazụ Touchwiz na-eme nke ọma -enweghị ama lag nke na-anyịgbu Samsung omenala oyi akwa. Samsung Galaxy S6 Edge na-arụ ọrụ dị ka silk mgbe ihe karịrị otu ọnwa ojiji.
Iji dozie esemokwu Touchwiz, Samsung lekwasịrị anya na ịbubata usoro ahụ karịa site na itinyeghi otutu ngwa ya, na mgbakwunye ime ka ufodu nhọrọ di.
Ee, a ka nwere ụzọ mkpirisi dị jụụ. Otu n’ime ihe m ji rụọ ọrụ nke ukwuu maka ịrụ ọrụ bụ mbenata nha otu ngwa. Naanị ị ga-amịpụta mkpịsị aka gị site n'akụkụ aka ekpe nke elu gaa n'akụkụ aka nri ala iji belata nha nke ngwa ị mepere, na-enye gị ohere ịnwe ọtụtụ ngwa na ihuenyo n'otu oge. I nwekwara ike iwelata ngwa a ka obere okirikiri ga-egosi site na itinye ngwa. Bara uru ma dị mfe.
Mgbe ụfọdụ, anyị nwere ike ịhụ oge nzaghachi dịtụ elu karịa nke nkịtị mgbe ị na-eme mgbanwe n'etiti ngwa dị iche iche, mana ọ na-eme obere oge na ọdịiche dị ntakịrị.
Akụkụ ọzọ dị ịrịba ama na-abịa na keyboard. NA keyboard nke Samsung Galaxy S6 Edge dị ezigbo mma. Na mgbakwunye na icheta okwu anyị ji, keyboard na-arụ ọrụ ọfụma.
Ihe ngosi Galaxy S6 adịghị abịa na Swiftkey arụnyere, ọ dịghịkwa ya mkpa. Samsung nwa afọ keyboard mezuru ozi ya n'ụzọ zuru oke, yabụ na nke a, anyị karịrị ọrụ karịa na-enweghị mkpa iji keyboards ndị ọzọ.
Dị ka ọ dị na mbụ na Samsung, Galaxy S6 Edge anaghị etinye redio FM. Ọ bụ otu ihe m na-aghọtaghị. O siiri Samsung ike itinye redio FM n’igwe ha? Ọ bụghị otu ihe iji iji redio ebudatara na, na mgbakwunye na mgbasa ozi na obere oge na mgbaama ahụ, nwere nsonazụ data.
A akara mkpisiaka ihe mmetụta kwesịrị ekwesị nke kacha mma gam akporo ekwentị
Samsung amụtawo site na mmejọ ya. Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na Samsung Galaxy S6 Edge adịghị ihe ọ bụla dị ka nke dị na Galaxy S5. Na nke a, ihe mmetụta biometric na-arụ ọrụ zuru oke, ngwa ngwa na-achọpụta akara ụkwụ na anyị echeburu na mbụ site na itinye mkpịsị aka gị na bọtịnụ mmalite.
Na vidiyo ị nwere ike ịhụ na mgbe m jiri mkpịsị aka ọ bụla m jikọtara na mbụ, mkpisiaka ihe mmetụta na Samsung Galaxy S6 Edge na-amata mkpịsị aka m na ntụziaka ọ bụla. Ọ́ bụrụkwanụ na mmadụ ewere ekwentị gị? Obi sie gị ike na mgbe anyị nwesịrị ọtụtụ mbọ ekwentị na-agbachi ma rịọ paswọọdụ anyị abanyeburu.
Ugbu a ndị na-agụ akara mkpisi aka na-aghọzi ejiji, anyị nwere ike ịsị na Samsung kpọgidere ya iji nye azịza ya nwere ike iguzo na Apple's iPhone 6 ma ọ bụ ihe ọ bụla gam akporo ngwaọrụ nwere ihe mmetụta nke ụdị a.
Igwefoto nke Samsung Galaxy S6 Edge ga-atọ ndị hụrụ foto ụtọ
Igwefoto bụ otu n'ime ike nke Samsung Galaxy S6 Edge. Anyị ekwuola banyere ya n'ọtụtụ isiokwu anyị gosipụtara Esemokwu dị n’etiti igwefoto nke Samsung Galaxy S6 Edge na igwefoto nke iPhone 6 PlusNa mgbe otu ọnwa na Galaxy S6 Edge enweghị m ike inwekwu obi ụtọ.
Iji malite, Samsung etinyela usoro ịnweta ngwa ngwa na igwefoto: Naanị anyị ga-pịa bọtịnụ mmalite ugboro abụọ iji mepee igwefoto. Ngwa ngwa ma dị irè. Ọsọ nke ọ na-ese foto bụ ngwa ngwa, ọbụlagodi na ọnọdụ ebe oghere ga-enwu ọkụ dị ka o kwere mee tupu ịse foto.
Su ọtụtụ ụdịdị ọ na-enye anyị ọtụtụ ohere; Chọrọ retouched selfie? Beautydị mma nke Galaxy S6 Edge na-ekwe nkwa ezigbo onyonyo n'agbanyeghị na ọ na-emezigharị, ọ dịghị ihe jikọrọ ya na ọdụ ndị China na ihe niile ha na-eme bụ ime ka anya gị dịkwuo ukwuu.
Tozọ dekọọ ngwa ngwa mmegharị vidiyo Ọ na-enye arụmọrụ dị egwu, na-enye gị ohere ịdekọ usoro ma dezie site na otu mkpanaka nke akụkụ nke vidiyo ahụ ga-egwu na nwayọ nwayọ na ọsọ ọ bụla.
Ọbụna na-ese foto abalị m achọpụtala nke ahụ Igwefoto Samsung Galaxy S6 Edge bụ otu nzọụkwụ n'ihu ndị na-asọmpi ya. Anyị nwere ike iru na nkwubi okwu na mpaghara igwefoto Samsung Galaxy S6 Edge enweghị onye na-ama ya aka.
Mkpebi na echiche mgbe ị jiri Samsung Galaxy S6 Edge maka otu ọnwa
Samsung emeela ezigbo ọrụ. Onye nrụpụta Korea chọrọ ngwaahịa ga-enwetaghachi ntụkwasị obi na ndị ahịa ya. Na enweghị obi abụọ ọ bụla Samsung Galaxy S6 Edge na Galaxy S6 enweela ihe ịga nke ọma.
Maka ọrụ m, enwere m ọtụtụ narị ekwentị m n'aka ma nke a bụ oge mbụ m nwere mma Samsung mbụ nwere njiri mma a, na mgbakwunye na arụmọrụ pụrụ iche, igwefoto kachasị mma na ahịa na Touchwiz na-arụ ọrụ nke ọma.
Ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche mbelata nke ọnụahịa nke ọdụ abụọ ahụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ekwentị na adịchaghị mma, Samsung Galaxy S6 Edge agaghị emechu gị ihu. N'ezie, ọ bụrụ na ị na-eji ọtụtụ ọrụ dịka Spotify, nke chọrọ ịchekwa ọtụtụ data na ekwentị gị, nyocha ka mma nal Samsung Galaxy S6 Edge 64 GB, nke na-efu euro 799. Na euro 100 ndị ahụ nwere ike ime mgbanwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy S6 Edge, nke a bụ ahụmịhe m mgbe ọnwa ejirila
Sọpụrụ 7i na igwefoto na-agbanwe agbanwe
[APK] Download nbudata ohuru nke Google Ugbu a Launcher si na Android 6.0 Marshmallow